China Duct System Manufacture and Factory | Jrain
Fiberglass duct dia azo ampiasaina handefasana ny entona ao ambanin'ny angovo fandrehitra. Ny fantsona toy izany dia mety ho boribory na mahitsizoro, ary mahatohitra ny entona mandoto, toy ny gazy klôro, ny gazy, sns.
Modely: boribory, boribory, endrika manokana, namboarina sns.
Ny Jrain dia afaka mamolavola fantsom-bolo vita amin'ny fibre vita amin'ny alàlan'ny alàlan'ny rindrambaiko maoderina toy ny FEA (Finement Element Analysis), Auto CAD, sns sns.
1. Duct miaro amin'ny alalàn'ny fangatahana herinaratra FGD;
2. Fandringanana ny tanana na naratra mafy;
3. Zavamaniry maromaro hanamboarana tontolo simba isan-karazany
4. Rivitra famonoana afo hahatratrarana ny fiparitahan'ny lelafo kilasy
5. Engineering injeniera, kajy, ny CAD endrika, FEA
- Sokajin-javamaniry - Platformika - Fantsakan-drano - Manholes - Fiarovana amin'ny fandroahana electrostatic
Fatrerglass duct dia antsoina koa hoe fantsona fiberglass, miaraka amin'ny fibre E-vera ho fitaovana fanamafisana sy hodi-doko toy ny fitaovana fototra. Izy io dia karazana fantsona fibre vaovao. Miaraka amin'ny fananana tena tsara toy ny tsindry fanoherana, fanoherana ny refy, lanja maivana, fanoherana ny fahanterana, dia nampiasaina be amin'ny fitrandrahana lakaly, fanodinana ny fako, fanalefahana ary fitsaboana ny asidra fako, sns.
Raha ny fepetra takiana dia azo atao ny loko sy ny endriny takiana amin'ny làlana ny FRP. Mahavita manaraka ny fanirianao ny Jrain amin'ireto lafiny ireto.
Mahavita mamolavola, mamatsy, manangona ary mametraka ducts amin'ny famokarana herinaratra ny jrain. Mahafantatra antsika ny manome tohatra any amin'ny tsenan'ny herinaratra, ao anatin'izany ny rafitra FGD. Ny lakandrano dia azo amboarina amin'ny tranokala na any amin'ny atrikasa.
Ankoatra ny ducts, Jrain dia manome koa:
1. 90 ° sy 45 ° elk, ary fefy satroka
2. Tetezamita fitaterana
3. Flanges ho an'ny fametrahana duct mora
4. Ny fanitarana miaraka
Previous: System Piping
Rafitra Drafitra FRP
GRP Duct System
hamolavola, Masinina fanamafisana GRP, Mamatotra fanamafisana FRP, Famolavola grating, Nohavaozina Fiberglass, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass,